I-Semalt ichaza indlela yokulwa ne-Botnet Malware
Ukusetshenziswa kwe-botnets kuyinto entsha. Ukusetshenziswa kwabo ekuhlaselweni kweminyaka eyishumi edlule kuye kwabangela ukulimala okubi kakhulu kwazisulu. Ngakho-ke, kunomzamo omkhulu owenzelwe ukuvikela malware we-botnet, noma ukuwavala yonke indawo lapho kungenzeka khona.
U-Ivan Konovalov, uchwepheshe we-Semalt , uchaza ukuthi igama elithi botnet liqukethe amagama amabili: Bot, okubhekisela kukhompyutha enegciwane lesandulela ngculazi, ne-Net okuyinto uchungechunge lwamanethiwekhi axhunyiwe ndawonye. Akunakwenzeka kubantu abahlakulela nokulawula i-malware ukuze basebenzise amakhomphyutha abawasebenzisa ngesandla. Ngakho-ke, kubangelwa ukusebenzisa amabhodlela enza kanjalo ngokuzenzekelayo. I-malware isebenzisa inethiwekhi ukusabalalisa kwamanye amakhompyutha.
Uma ikhompyutha yakho isulelekile nge-malware futhi iba ingxenye ye-botnet, lowo oyilawulayo angenza izinqubo zangemuva kude. Lezi zenzo kungenzeka zingabonakali kubantu abasebenzisa umkhawulokudonsa we-inthanethi ophansi. Umkhiqizo wokulwa ne-malware uyindlela engcono kakhulu yokubona ukuthi kukhona i-malware. Ngaphandle kwalokho, abasebenzisi be-tech-savvy bangabheka izinhlelo ezisetshenziswayo noma ezifakwe ohlelweni.
I-botnet ngumsebenzi womuntu onenjongo enonya. Zisebenzise eziningana njengokuthumela ugaxekile nokweba imininingwane. Okubaluleke kakhulu inani le "bots" elikhona, kubaluleke nakakhulu umonakalo abangabangela. Isibonelo, izingxube zobugebengu ezihleliwe zisebenzisa ama-botnets ukutshontsha ulwazi lwezezimali ukwenza ukukhwabanisa, noma ukuhlola abasebenzisi abangabhekeleli futhi basebenzise ulwazi olungatholakali olutholiwe ukuze baxoshe.
Iseva ne-control iseva isebenza njengendawo eyinhloko yokungena kuyo amanye amakhompyutha axhuma kwinethiwekhi. Ku-botnets amaningi, uma umyalo kanye ne-server yokulawula ivaliwe phansi, lonke ibhodlela liyawa. Kunokunye okuhlukile kulokhu, noma kunjalo. Okokuqala lapho amabhodnetshi asebenzisa ukuxhumana kontanga nokuya futhi awunawo umyalo nokulawula iseva. Owesibini yi-botnets enama-oda angaphezu kweyodwa namaseva wokulawula asezindaweni ezahlukene..Kunzima ukuvimbela i-bots efanelekile le ncazelo.
Izingozi ezifanayo abantu abesaba kuzo izinhlelo ze-malware ziyasebenza nasezikhunjini. Ukuhlaselwa okuvame kakhulu ukutshontsha ulwazi olubucayi, ukulayisha ngaphezulu amaseva ewebhu ngenhloso yokuwahlisa noma ukuthumela ugaxekile. Ikhompyutha elinegciwane eliyingxenye ye-botnet ayiyona eyomnikazi. Umhlaseli ugijima ngokude futhi ikakhulukazi ngemisebenzi engekho emthethweni.
Ama-botnets asongela kokubili amadivayisi ezinkampani nezomuntu siqu. Noma kunjalo, amadivaysi ezinkampani anezivumelwano ezingcono zokulondeka nokuqapha. Akusho ukuthi banemininingwane ezwelayo yokuvikela.
Ayikho iqembu elithile elibhekene nengozi kakhulu kunezinye. I-malware esetshenzisiwe ingathatha amafomu ahlukene kuncike eqenjini elihlosiwe elihlosiwe.
I-Conficker yi-botnet enkulu kakhulu okwamanje erekhodini njengoba yaziwa ukuthi ilalele ama-computer ngokushesha. Kodwa-ke, abathuthukisi abakaze balisebenzise ngenxa yokunakekelwa okukhulu nokuhlolisiswa okukhanga emphakathini wocwaningo. Ezinye zifaka iSiphepho kanye ne-TDSS.
I-ESET isanda kuthola i-botnet ekuphenyweni kwayo ku-Operation Windigo. Yayiphelele amaseva angu-25,000. Inhloso yalo kwakuwukuhlehlisa okuqukethwe okunonya kumakhompiyutha abasebenzisi, ukweba iziqinisekiso zabo, nokuthumela imilayezo yogaxekile koxhumana nabo kulawo ma-computer.
Azikho uhlelo olulodwa olusebenzayo oluphephile ekuhlaselweni kwesofthiwe enonya. Abantu abasebenzisa amadivaysi e-Mac bajwayelene kakhulu ne-malware ye-Flashback.
Uhlelo oluphikisana ne-malware yindawo okumele iqale lapho ukulwa namabhodnethi. Ukuthola i-malware engenzeka kunethiwekhi ye-network kulula.
Ukuphakamisa ukuqwashisa nokufundisa abantu mayelana nosongo. Abantu kudingeka baqaphele ukuthi amakhompiyutha anegciwane angasongela wona kanye nabanye.
Thatha wonke ama-computer aphethwe yi-intanethi ungaxhunyiwe futhi uhlole ngokucophelela ukushayela ukuze uqinisekise ukuthi uhlanzekile.
Umzamo wokubambisana wabasebenzisi, abacwaningi, i-ISPs, kanye neziphathimandla Source .